Kohalpur Times » पदमा तपाईंहरुको यति धेरै आसक्ति किन ? पदमा तपाईंहरुको यति धेरै आसक्ति किन ? – Kohalpur Times
पदमा तपाईंहरुको यति धेरै आसक्ति किन ?
२९ बैशाख २०७८, बुधबार १७:४८
आफैलाई हासो र घृणा पनि लाग्छ । पढेर बुझेर हुँदो रहेनछ । कमरेड रन्जन शर्माको अनुयायी भएर कलास खाईयो सायद यो नाम पनि थहा छैन हो यनिहरु मध्ये कसैलाई अनि रातमा लड्ने डरले पाखुरी समातेर हिडाईयो कमरेड प्रकाशलार्इ नेपालको साम्वादी आन्दोलनको उद्भाव, विकाश र वर्तमान अवस्था नामक किताव पनि पढियो कुनैका कुनैका सात सात दिन बसेर एकलौटी लफ्फाजी पनि सुनियो । आज हामी बउन्न वर्ष पुगियो पार्टी मात्रै लगानी छ, आन्दोलन र क्रान्ति प्रति अदम्य विश्वास छ । यद्ध्यापी आज सम्म कुनै उपभोक्ता समिति समेत बसेर काम गरिएको छैन भने सार्वजनिक पदमा पुग्ने अवस्था नै रहेन कमरेड माधव नेपाल तपाईं पहिलो पटक संसद हुँदा भोट हाल्ने केटा आज पचास वर्षको भयो । होइन र ? अनि झलनाथ खनाल अन्तरिम सरकारको कृषि मन्त्री । ईलाम बाट अविछिन्न सांसद । होइन न र ?
अव मेरो प्रश्न छ संसदीय व्यवस्थामा गोलचक्कर लगाउनको लागि हो । हाम्रो सिद्धान्त अनुसार लक्ष प्रप्तिको रणनीतिक कार्यभार अरु केही छ ? पदमा तपाईंहरुको यति धेरै आसक्ति किन ? के यो लडाइँ वर्ग हित रक्षार्थ हो रु हो भने आज त्यो वर्ग विश्व महामारीका कारण ओौषधो उपचार नपएर मृत्यु शैयामा छट्पटाएको छ वा लकडाउनका कारण भोकभोकै मोर्ने अवस्थामा छ । खै माईती घरमा नौटङ्की गर्दा तिनका आवाज मुखारित गरेको वल्की उखु किसान लाई लखेटी सिंहदरवार मूखी नारा ूहामी यताू छौ । छि छि छि । के तपाईको लडाई सार संग होईन हुदै होईन ।। के तपाईं संरचना परिवर्तन गर्न चहानु हुन्छ ? हुँदैन हुँदै होइन । तपाईं त हाम्रो भूराजनीतिले श्रृजना गरेको दलाल नोकरसाही तन्त्रको मेशिन हो । के तपाईं को नजरमा श्रमजीवी वर्ग पक्षधरता छ ? छैन । तपाईं र तपाईका कथित कमरेड चाल्स फरिय,सेनसामन, रोवर्ट ओवेन र प्रधोपंथी हुन । व्याख्या र विश्लेषणबाट मन्त्रमुग्ध पार्ने तर व्यावहारमा लम्पट । त्यसै भनेनन् दार्शनिकले “चुरो कुरो भनेको ब्याख्या मात्रै होइन मूलत संसार बदल्नु हो” के यो गलत हो । म तपाईं हरुलाई वर्ग समन्वयकारी तत्वको संज्ञा दिन्छु । खण्डन गर्नुहोस । के कार्यक्रता र पार्टी तपाईहरुका व्यक्ति वा व्यक्तिगत स्वर्थ सिद्ध गर्ने ओौजार हुन ? २०५० साल देखी तपाईं अनवरत पार्टीको सिर्स नेतृत्वमा हुनु हुन्छ । तपाईले संचालन गरेको पार्टी कुन हैसियतमा पुर्याउनु भयो याद छ नि ? गलेर हाला परेर आत्म समर्पण गरेको होइन । निर्वाचन दुई दुई ठाउँबाट हरेर प्रधानमन्त्री बन्ने नैतिकवान मान्छे नि तपाई । जनताको म्यन्डेट अनुसार ५ वर्ष कुरेर आफ्नो कम्जोरी पैल्यान नक्ने ? जनता हराएको पनि प्रतिकारात्मक आलोचन हो । जनताले गरेको निर्णय नसच्याई गद्दी आरोहण गरि जनतालाई अपमान गर्ने सबै भन्दा ठूलो अहंकारीले खरुलाई दम्भी अहंकारी देख्नु उसको अन्तरवस्तु मुखारित मात्रै भएको हो । २०३९ सालको अन्तर्विरोध कसरी हल गर्नु भयो ? पार्टी स्वतन्त्रता कि राजनीतिक स्वतन्त्रता भन्ने नारा तपाईं ले विशेषतः तपाईंहरुले लिएको लाइन राजनीति स्वतन्त्रता हो त्यही भएर तपाईले सि पी मैनालीलाई षड्यन्त्र पूर्ण तरिका बाट हटाएर झलनाथलाई महासचिव बनाउनु भयो मालेको तर २०४६ को चौथो सिराह महाधिवेशनले तय गरेको राजनीतिक कार्यदिशा त पार्टी स्वतन्त्रताक । हैन र ? आफ्नो विचार परास्त हुदा कहि कतै सिपी मैनाली संग माफी (आत्मआलोचना) गर्नु भयो त ? २०५० साल जेष्ठ देखी २०६४ मंसिर झन्डै १५ वर्ष तपाईले पार्टी परिचालन कसरी गर्नु भयो समिक्षा गर्नु भएको छ । २०५२ सालमा तपाई उपप्रधानमंत्री तथा परराष्ट्र मंत्री बन्नु भयो मानमोहन अधिकारी जननेता मदन भण्डारीको बैचारिक जगमा बनेको नौ महिने सरकारले गरेको कामको सम्पूर्ण जस आफू ग्रहण गर्ने अपजस अरुको टाउकोमा थोपर्ने गलत प्रवृत्ति देखियो तपाईं अनि तपाईले खडा गरेका भजनमंडलीबाट पार्टी नेतृत्वमा आफै अनि महाकाली संधी गरेको दोष अर्कैको थाप्लोमा ? २०५४ मा पार्टी विभाजन किन र कस्ले गर्यो नेपालगंज महाधिवेशनमा खुकुरी चलाउने गुण्डा को हुन ? बामदेव सि पी मैनाली राधाकृष्ण मैनाली लगायतका मन्छे लखेटेर पार्टी कम्जोर बनाउने काम कसले गर्यो । ज्ञनेन्द्र शाहले प्रतिगमन गर्दा आधा प्रतिगमन सच्चियो भनि आफ्ना भजन मंडली सहित विन्तपत्र चढाउदा लज्जाबोध भएन ? यो विषयमा आत्मआलोचना गर्नु पर्दैन्थ्यो । देशभरमा ७३ जिल्ला कामिटी आफ्नो तर दुई जिल्ला कमिटी फरक हुदा भंग गरि आफ्ना हनुमान् सथापित गरेको होइन तपाईले । आफ्ना समर्थक नेता कार्यक्रताले फरक धारका नेता कार्यक्रतालाई कार्यक्रममा आमन्तरण गर्यो वा बास दियो भने स्पस्टिकरण सोध्ने तपाईं अनि तपईका भजनमंडली होईनन ? २०७४ साल सम्म म तपाईका यीनै क्रियाकलापको प्रत्यक्षदर्शि हुम ।२०७१ सालको महाधिवेशन ताका तपाई अनि तपाईंका भजन मंडलीको प्रचार कस्तो निकृष्ट र अराजनैतिक थियो ? मलाई लाग्छ ति कार्यक्रता तपाई बाट नै दिक्षित थिए । याद छ नि समान्य मानविय चेत पनि हराएका पशु जस्तै विल्कुलै साँड जस्ता । के पि मर्छ शरिर सडि सकेको छ । खै तपाईं को संस्कार खै वर्गिय माया । एउटै कमिटीमा वर्षौ संगै काम गरेका मित्र माथी अराजनैतिक तथा तल्लो स्तरका टिप्पणी छि छि ।। अनि के पीलाई साथ दिने लुच्चा, लफङगा ट्यापे मुद्रे अनि तपाईंलाई जयजयकार गर्ने सन्त महन्त प्रमात्म । यस्तो पनि द्व्न्द्धवाद ? हो मलाई थाह छ सकार भित्र नकार र नकार भित्र सकार पनि हुन्छ भन्ने तर तपाईं त आफैलाई सकारमा २०० प्रतिशत र नकार माईनस २०० प्रतिशत ठान्नु हुदो रहेछ । यहि नेर समस्या छ कमरेड देश भरका हामी जस्ता कार्यक्रताहरुको मन जित्नुहोस तपाईं लाई नेता मानेको हो मान्न समस्या छैन । हजारौ लाखौ कार्यक्रता तपाईहरुको सहि निर्णयको पर्खाईमा छन ।अहमता दम्भ अनि हिनताबोध र कुण्ठा पालेर अगाडि बढ्न सकिदै । सबै आआफ्नो ठाउबाट समिक्षा गर्दै अगि बढौ न्याय समानता सुख शान्ति सहितको समृध्दि हाम्रै पालामा सम्भव नत्र इतिहासले तपाईहरुलाई धिक्कर्दै अगाडी बढ्ने छ। नपढेर नवुझेर हो ४० वर्ष कम्युनिष्ट पार्टीमा लगेको कथित विद्वान जतिय क्षेत्रिय मोर्चा पछुवा सिर्श नेता भएको चालिस बर्ष सम्म मार्क्सवाद लेनिनवादी वा दर्शनशास्त्र र राजनीति नवुझेका मान्छेलाई विद्वान् कहिलिने देशका सोझा मनुवा हामी हामी । धन्यवाद